मै मात्रै भइरहनुपर्छ भन्‍ने होइन : कुलमान घिसिङ- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
'सरकारले काम गर भन्यो भने गर्न सक्छु'
'अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकको टिप्पणीमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्न भन्ने बुझाइ देखिन्थ्यो'
आश्विन ३, २०७७ विजय तिमल्सिना
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्रिय भई २६ वर्ष बिताएर बिदाइ हुनुभएको छ । केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
प्राधिकरणमा तपाईंलाई दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । यो देख्दा कस्तो महसुस हुन्छ ?
कतिपयले तपाईंलाई प्रचारमुखी भएको आरोप लगाउँछन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरा मलाई भन्दा पनि आमपत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ । मैले मेरो बारेमा यो कुरा लेखिदिनुपर्‍यो, यो गर्दिनुपर्‍यो भनेर अहिलेसम्म कहिल्यै भनेको छैन । मिडियाका साथीहरूले नै मलाई फलोअप गरिरहनुभएको हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेका राम्रा, नराम्रा कामबारे जुन किसिमले सम्प्रेषण भएको छ, यसका लागि हामीले मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । चार वर्षको अवधिमा कुनै पनि ठाउँमा सबै काम मैले मात्रै गरेको हो, मैले यो गरें भनेर भनेको छैन । मैले यो सामूहिक प्रयासको उपलब्धि हो भनेको छु । सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सञ्चालक समिति र आमसर्वसाधारणले सहयोग गर्नुभएको छ । सबैको सामूहिक प्रयास हो भनिरहेको छु ।
पब्लिकले यसमा बढी क्रेडिट मलाई दिने गरेका छन्, सञ्चारमाध्यममा मेरो प्रचार बढी भयो भन्ने गरेको देखिन्छ तर यो कुरा मैले भनेको होइन नि ! जस अपजसको भागीचाहिँ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि एउटा हो । नराम्रो काम गरेको भए प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई त्यही हिसाबले गाली पनि गर्थे । राम्रो काम गर्‍यो भनेर अलिकति प्रोत्साहन पाएको छु । त्यो भनेको मैले मात्र पाएको होइन, समग्र सरकारले पाएको हो भनेर सम्झिनुपर्छ ।
आफ्नो चारवर्षे कार्यकालप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडको सिस्टममा अगाडि बढ्दै जानु पर्नेछ । उत्पादित विद्युत्लाई भारतसम्म कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने छ । यसको सफलताका लागि नेतृत्वले धेरै ठूलो काम गर्नुपर्नेछ । देशभित्र उत्पादन हुने परियोजना, ट्रान्समिसनको परियोजना, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सबै परियोजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । तामाकोसी करिब २–३ महिनामा सम्पन्न हुन्छ । प्रसारण लाइनलाई पनि त्यही हिसाबले थप गर्नुपर्नेछ । वितरण सबस्टेसन थप गर्नुपर्नेछ, औद्योगिक करिडोरमा प्रसारण लाइन बढाउनुपर्नेछ, गाउँगाउँमा सिँचाइ सुविधाका लागि विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन, कुकिङका लागि इन्डक्सन कुकरको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । चार वर्षअघि विद्युतीकरण ६३ प्रतिशत मात्रै थियो, अहिले ८६ प्रतिशत पुगेको छ । अब शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । यी सबै काम आगामी दिनका चुनौती हुन् ।
म आउँदा विद्युत् खपत १३० युनिट प्रतिव्यक्ति थियो । अहिले २६० पुगेको छ । खपत करिब दोब्बर भएको छ । बरु पिक डिमान्ड घटेको छ । यसले हामीलाई राम्रै गरेको छ । प्रतिव्यक्ति खपत बढेको छ, योभन्दा धेरै बढाउनु छ । ठूला प्रोजेक्ट सुरु भएन भन्ने गलत आरोप हो । ठूलो प्रोजेक्टका लागि निरन्तर रूपमा लगानी, डिटेल डिजाइनको काम गरिरहेका छौं । प्रोजेक्टहरू आजको भोलि सुरु हुने होइन । अपर अरुणको ३ सय मेगावाटको प्रोजेक्टलाई हामीले १ हजार ६० मेगावाटको प्रोजेक्ट डिजाइन अप्टिमाइजेसन गर्‍यौं । नेपालको पानी जनताको लगानीअन्तर्गत यो अघि बढिरहेको छ । त्यो डिटेल डिजाइन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
आयातले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको होइन । आयात एउटा फ्याक्टर हो । मभन्दा अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदनमा ३ सय ५३ मेगावाट भारतबाट आयात गरेको लेख्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मकै बढी विद्युत् आयात गर्न सक्यौं, यो हाम्रो उपलब्धि हो भनेर लेख्नुभएको थियो । ३ सय ५३ मेगावाट उहाँले त्यो बेलै आयात गर्नुभएको थियो । २०७२/७३ को खपत् करिब ३ अर्ब ७० करोड युनिटजति थियो । त्योमध्ये १ अर्ब ७७ करोड युनिटजति विद्युत् आयात गरिएको थियो । कुल उपलब्ध ऊर्जाको ३५–३६ प्रतिशत आयात त्यो बेलामा पनि थियो । तर, लोडसेडिङ सुक्खायाममा १५–१६ घण्टा थियो । किन त्यो बेलामा लोडसेडिङ अन्त्य भएन त ?
पैसाका आधारमा भन्ने हो भने त्यो बेला वार्षिक १४ अर्बको विद्युत् आयात गरिएको रहेछ । अहिले आयात १३ अर्बबराबरको मात्रै छ । कुल उपलब्ध ऊर्जाको २२ प्रतिशत मात्रै आयात गरिएको छ । खपत दोब्बर भएको छ तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आयातलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर उहाँहरूले सोच्नुभएको थियो त ? गत वर्ष हामीले १३ अर्बको विद्युत् आयात गर्दा १ अर्ब ७ करोडजतिको विद्युत् त निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष आयात करिब करिब ५–६ अर्बमा झर्नेछ । आगामी वर्ष करिब करिब शून्यमा झर्नेछ । विद्युत् आयात एउटा पक्ष हो तर त्यसको व्यवस्थापन गम्भीर हो । हामीले सुक्खायाममा पनि कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दीलाई करिब करिब पूर्ण क्षमतामा चलायौं, चिलिमेलाई चलायौं । यो कुरा कसैले सोचेकै थिएन । डिमान्डतर्फ चार/पाँच सय मेगावाट इन्भरर्टरहरू बाहिरियो, यो त हाम्रो उत्पादनजस्तो भयो । लस पनि १० प्रतिशतले घट्यो । यो भनेको लोड साइटबाट मात्रै १५० मेगावाट उत्पादन भएको जस्तो हो ।
चिलिमेबाट प्राधिकरणमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन अवस्थाबाट एकैपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभयो । अहिले त्यो समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
त्यो एउटा पीडादायी अवस्था थियो तर सरकारले मेरो क्षमताको मूल्यांकन गर्‍यो र कार्यकारी निर्देशकको पदमा बस्ने मौका दियो । आज कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा हुँदाखेरी देशैभरि कुलमान घिसिङको जुन चर्चा भयो, त्यसमा म एकदमै सन्तुष्ट छु । किनभने चिलिमेबाट आउँदा भनेको थिएँ, कुनै न कुनै रूपमा जोडिनेछु भनेर । म कार्यकारी निर्देशक हुँदा ४ वर्ष चिलिमेको अध्यक्ष भएँ । यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । मैले जुन खालको सफलता र चर्चा पाएँ त्यसमा म खुसी छु ।
पहिलो चुनौती अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि गुणस्तर र विश्वसनियता कायम गर्ने चुनौती छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा भएको सुधारलाई कसरी कायम राख्ने ? प्राधिकरण नाफामा रहेर जनतालाई जतिसक्दो सस्तोमा विद्युत् दिने हो । अब कहिल्यै पनि विद्युत्को मूल्य बढ्दैन, घट्दै जान्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालन दक्षता बढाउनुपर्छ । प्राधिकरण सधैं नाफामा जानुपर्छ । यो वर्ष घरायसी ग्राहकका लागि पनि ९–१० प्रतिशत मूल्य घटेको छ । १५ प्रतिशतमा झारेको चुहावटलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने अर्को चुनौती छ । संस्थागत संरचनाहरू कसरी चुस्त दुरुस्त पार्ने ? यो काम पनि बाँकी छ ।
विद्युत् आपूर्ति भनेको आजका लागि वा भोलिका लागि मात्रै योजनामा काम गरेर हुन्न । २० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । मैले आज एउटा ठूलो प्रोजेक्ट सुरु गरें भने १० वर्षपछि बल्ल आउँछ । अब १० वर्षपछि लोड के हुन्छ त ? आज विद्युत् बढी भयो भनेर भोलिका लागि प्रोजेक्ट सुरु नगर्ने भन्ने हुँदैन । ठूला परियोजना कसरी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा भारतसँग कसरी सम्बन्ध अघि बढाउने भन्ने पनि प्राथमिकता हुनुपर्छ । धेरै प्रयासपछि भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि गाइडलाइन बनेको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेलीजस्ता पूर्वाधार अघि बढेको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइनको जालो मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिणको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । चीनसँग जोड्ने प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
तपाईंको कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद आयो । यो मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो । समयमै बिलिङ नगरेको र असुल नगरेको आरोप पनि लाग्यो । त्यसमा तपाईंलाई कहाँ गल्ती भयोजस्तो लाग्छ ?
यो महसुल विवाद मेरो कार्यकाल सुरु हुनु एक वर्ष अगाडिदेखिको हो । यो विवादभन्दा पनि एक वर्षअघि नै सुरु गर्नुपर्ने कामलाई हामीले सुरु गरेका हौं । हाम्रो पालामा आएर बिलिङ गरिएको हो । पहिला त्यसलाई महसुलमा देखाइएको भए पनि बिलिङ गरिएको थिएन । किन गरिएन, थाहा भएन । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पछि हामीले समिति गठन गरेर छानबिन गर्‍यौं, कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले प्रतिवेदन दियो । पछिल्लो चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।
आगामी दिनमा के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायमा पनि सरकारले जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने आस गर्नुभएको हो ?
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ०९:१४
दयाहाङ राई रेड पाण्डा संरक्षण दूत
आश्विन ३, २०७७ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — रेड पाण्डा नेटवर्कले कलाकार दयाहाङ राईलाई हाब्रे (रेड पाण्डा) संरक्षण दूत नियुक्त गरेको छ ।संरक्षण दूत नियुक्त भएसँगै कलाकार राई दुर्लभ वन्यजन्तु हाब्रे (रेड पाण्डा) को संरक्षण र अवैध चोरीसिकारी विरुद्धमा जनचेतना जगाउने अभियानमा सहभागी हुनेछन् ।
‘हामी प्रसिद्ध कलाकार दयाहाङ राईसँग रेड पाण्डा संरक्षण कार्यमा सहकार्य गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छौं’, रेड पाण्डा नेटवर्कका राष्ट्रिय निर्देशक आङफूरी शेर्पाले भनेका छन्, ‘यो सहकार्यको माध्यमबाट हाब्रे संरक्षणको अभियानमा सफल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
राईले पनि हाब्रे संरक्षणमा सम्मिलित हुन पाएकामा उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म पूर्वी नेपालको ग्रामीण परिवेशमा हुर्कें, मेरो बाल्यकाल प्रकृतिको सामिप्यतामा बित्यो तर मलाई हाम्रो क्षेत्र यति सुन्दर जनावरले सुशोभित छ भन्ने कुराको हेक्का कहिल्यै भएन’, उनले भने, ‘राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको यो वन्यजन्तुको संरक्षणमा सहभागी हुन पाउँदा गौरवान्वित छु ।’
कलाकार दयाहाङ राई र रेडपाण्डा नेटवर्कका सोनाम टासी लामा ।तस्बिर : रशिक महर्जन/रेडपाण्डा नेटवर्क
राई नेपाली चलचित्रका स्थापित कलाकार छन् । उनका हाईवे र ह्वाइट सन अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मै सफल चलचित्र हुन् । राईले दासढुंगा, सम्बोधन र कबड्डी कबड्डीका लागि तीनवटा राष्ट्रिय अवार्ड जितेका छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा हाब्रेको अनुसन्धानमा काम गर्दै आएको रेडपाण्डा नेटवर्कले पाँचथर–इलाम–ताप्लेजुङ भू–परिधि क्षेत्रका १० वटा हाब्रेको घाँटीमा जीपीएस स्याटेलाइट कलर जडान गरेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
पूर्वी नेपालमा स्वचालित क्यामेरामा कैद भएको हाब्रे । तस्बिर: रेडपाण्डा नेटवर्क
वन तथा भू–संरक्षण विभागको वन्यजन्तु महाशाखाका प्रमुख सहसचिव देवेशमणी त्रिपाठीका अनुसार विभागको पहलमा पहिलो पटक हाब्रेको अनुसन्धानका लागि यसरी स्याटेलाइट कलर जडान गरिएको हो ।
संरक्षित सूचीको हाब्रेको संरक्षण गर्न सरकारले पाँच वर्षे (सन् २०१९–२०२३) कार्ययोजना बनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ०८:५६